वर्षा राउतर संजोग कोइरालाको जोडी - जीवनशैली - साप्ताहिक
वर्षा राउतर संजोग कोइरालाको जोडी
वर्षा राउत, अभिनेत्री तथा संजोग कोइराला, अभिनेता
संजोग कोइराला : तिमी आज पनि ढिलै आयो हैन ?
वर्षा राउत : म जहिले पनि ढिला हुन्छु रे ? हेर न भनेको ।
संजोग : किन ढिला भयो ? भन न त ।
वर्षा : भाइहरूसँग भिडियो बनाउँदै थिएँ । अँ...यहाँ आउनै लाग्दा भाँडा पनि माझ्नुपर्‍यो ।
संजोग : ए तिमी भाँडा पनि माझ्छौ, मलाई त विश्वास लागेन ?
वर्षा : म घरको कत्ति काम गर्छु, तिमीलाई के थाहा ?
संजोग : अनि भाइहरूसँग के–को भिडियो बनाएको नि ?
वर्षा : फुर्सदमा हामी डब मासमा भिडियो बनाइरहेका हुन्छौं, तिमीलाई थाहै छ नि ।
संजोग : त्यो त थाहा छ, तर तिमीजस्ती स्थापित कलाकारले त कुनै सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्ने होइन र ?
वर्षा : त्यो त हो नि...तर कहिलेकाहीं फुर्सदको उपयोग गर्न वा रमाइलोका लागि पनि यस्तो काम गर्नुपर्छ । अनि सुन न, सुरबिना कार्की मुम्बईमा छिन्, म पनि जाने नि ।
संजोग : किन जानुपर्‍यो नि तिमीले मुम्बई ?
वर्षा : एक्टिङ सिक्न नि ।
संजोग : तीन–तीनवटा हिट चलचित्र (नाइँ नभन्नु ल–४, छक्कापञ्जा र जात्रा) दिइसकेकी नायिकाले अझै पनि अभिनय सिकिरहनुपर्छ र ?
वर्षा : होइन, अभिनयमा निखार ल्याउन सिक्न जाउँm कि भनेर सोधेकी । मेरो अभिनयमा अझै पनि केही कमी छ जस्तो लाग्छ ।
संजोग : पर्दैन, कतै पनि जान । अभिनय नै सिक्ने भए काठमाडौंमै धेरै ठाउँ छन् । यहीँ सिक्दा भैहाल्यो नि । यहीँ वीरेन्द्र हमाल, सुनिल पोखरेल, अनुप बरालजस्ता सरहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको अभिनय वर्कसप पनि चलिरहेको हुन्छ । त्यहीं प्रशिक्षण लिए भैहाल्यो नि ।
वर्षा : ल ल...जान्नँ नि त । मैले हिजो मात्र सुनिल पोखरेल सरसँग कुरा पनि गरेकी छु ।
संजोग : मेरो विचारमा तिमीले अभिनय सिक्ने भन्दा पनि ज्यान घटाउनेतर्फ लाग्नु पर्छ ।
वर्षा : त्यसकै लागि तिमी र मैले सँगै जिम ज्वाइन गरेको होइन त, अब घट्ला नि ?
संजोग : खान भनेपछि आँखा देख्नु छैन, के–को घट्छ ज्यान ?
वर्षा : तिमीलाई थाहा छ नि, खानेकुरा नै मेरो कमजोरी हो । अहिले त म डाइटिङ पनि गरिरहेकी छु ।
संजोग : त्यो त थाहा छ, तिमी एग–डाइटिङ गर्दैछौ । तिम्रा लागि भनेर मैले तीन वटा अन्डा बोइल गरिरहेको छु । खाने हैन त ?
वर्षा : खै कहाँ छ अन्डा ? ल्याइहाल त ।